Kalfadhigga 2aad ee Baarlamaanka Galmudug oo si rasmi ah u furmay - Jowhar Somali news Leader
Home News Kalfadhigga 2aad ee Baarlamaanka Galmudug oo si rasmi ah u furmay
Kalfadhigga 2aad ee Baarlamaanka Galmudug oo si rasmi ah u furmay
Kalfadhigga labaad ee baarlamaanka Galmudug ayaa si rasmi ah xalay ugaga furmay magaalada Dhuusamareeb, Xafladda oo ka dhacday xarunta Shiirkole, waxaa ka qeyb galay Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Qoor-qoor, Guddoomiyaha Aqalka sare Cabdi Xaashi, Gudoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Nuur Gacal, Xildhibaano, Wasiiro, Bulsha rayidka, siyaasiyiin iyo marti sharaf kale.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Galmudug Xildhibaan Maxamed Nuur Gacal oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in howlo badan ay horyaallaan lana doonayo in lagu ansixiyo inta lagu guda jiro Kalfadhiga labaad ee xalay u furmay.
Gacal ayaa tilmaamay in 25-Hindise sharciyeed in Golaha Wakiilada uu horyaallo, meelaha ay ka yimaadeen ay yihiin Wasaaradaha Maamulkaas oo mid waliba u gudbisay hal hindise sharciyeed si cod baarlamaan loogu helo.
“Wasaarad waliba waxa ay soo gudbisay hal hindise sharciyeed oo ay baarlamaanka ka dooneyso in uu u ansixiyo, dabcan waa howlaha ugu muhiimsan ee nalaga doonayo meelmarinta kalfadhiga labaad inta aan ku guda jirno” ayuu yiri Afhayeenka Golaha Wakiilada Galmudug.
Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare BFS oo ka qaybgalay munaasabadda furitaanka kalfadhiga labaad ee Baarlamaanka labaad Dowlad Goboleedka Galmudug.
Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa sheegay in saddex arrimood ay ku guuleysteen Hay’adaha, madaxda iyo shacabka Galmudug, lagu diiwaangeliyay taariikhda oo baal dahab ah ka geli doonaan.
Ugu dambeyntii waxaa munaasabada ka hadlay Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Qoor-qoor isagoo soo bandhigay waxyaabaha waaweyn ee u qabsoomay muddada uu dhisan yahay maamulkaas.
Qoor-Qoor ayaa kusoo koobay todobo qodob oo qaybo hoosaadyo kale leh, isaga oo sheegay in maamulkiisa uu qorsheynayo hiigsiga himilooyinka fog si wax looga qabto waxyaabo kale oo horyaalla sida suu hadalka u dhigay.
“Waxaa inoo Furmay Kalfadhiga 2-aad Ee Barlamanka labaad Dowlada Galmudug, muddadii gaabteen ee la dhisay Galmudug-ta cusub waxaa la qabtay shaqooyin aad u muhiimsan, maamulka waxa uu gaaray guullo waaweyn oo aan kusoo koobay todobadaan qodob” ayuu yiri Madaxweynaha Galmudug.
Madaxweyne Qoor-Qoor waxa uu Baarlamaanka ka dalbaday in ay la shaqeeyaan Madaxda iyo laanta fulinta oo wajahaya howlo badan oo horusocod u baahan si door muuqda ay uga qaataan howlaha dalka.